အစိမ်းရောင် စွမ်းအင် ပလက်ဖောင်း ကိုမြှင့်တင်ရန် EV Link နှင့်ပူးပေါင်း သည့် စက်ဘီးစီး ကုမ္ပဏီကြီး Hello Inc ၏လက် အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ – Pandaily
အစိမ်းရောင် စွမ်းအင် ပလက်ဖောင်း ကိုမြှင့်တင်ရန် EV Link နှင့်ပူးပေါင်း သည့် စက်ဘီးစီး ကုမ္ပဏီကြီး Hello Inc ၏လက် အောက်ခံ ကုမ္ပဏီ
Nov 26, 2021, 18:57ညနေ 2021/11/29 12:38:03 Pandaily
သောကြာနေ့မင်္ဂလာပါ တရုတ် စက်ဘီးစီး ကုမ္ပဏီကြီး ။China Southern Power Grid Electric Vehicle Services Co., Ltd (EV Link) နှင့် မကြာသေးမီက လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့သည်တရားဝင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်.
သဘောတူညီ ချက်အရ ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုသည် မြို့ပြ ဒေသများရှိ လျှပ်စစ် ဘီး နှစ် ဘီး ၀ န်ဆောင်မှု ကဏ္ cooperate တွင် ပူးပေါင်း ပါ ၀ င် မည်ဖြစ်ပြီး ထို မော်တော်ယာဉ် များအတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လဲလှယ် ရေး ၀ န်ဆောင်မှု ကွန်ယက် ကိုတည်ဆောက် မည်ဖြစ်သည်။ AIoT, Artificial Intelligence and Big Data Technology ကို အခြေခံ၍ လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် + ပါဝါ + ဘက်ထရီ အားသွင်း စက် များပါဝင် လိမ့်မည်။
ပထမဆုံး ပူးတွဲ ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကို ဂွမ်ဒေါင်း ၊ ဟောင်ကောင် နှင့် မကာအို ရှိ Dawan in ရိယာ ရှိ Foshan City တွင် စတင်ခဲ့သည်။ အနာဂတ်တွင် ကုမ္ပဏီ နှစ်ခုသည် မြို့ပြ လူ့အဖွဲ့အစည်း အတွက် လုံခြုံ သော၊ သန့်ရှင်း သော၊ အသိဉာဏ် ရှိ သော၊ အကျိုးရှိ စွာ နှင့် အစိမ်းရောင် နှစ် ဘီး ခရီးသွား ၀ န်ဆောင်မှုများ ပေးရန် ရည်ရွယ်၍ တရုတ် တောင်ပိုင်းရှိ ပြည်နယ် များနှင့် မြို့ကြီး များသို့ တဖြည်းဖြည်း ဖွင့်လှစ် ရန် ဤ နေရာကို အစပြု ရန်အသုံးပြု လိမ့်မည်။
၎င်း ၏တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင် EV Link သည် China Southern Power Grid Co., Ltd. (CSG) လက်အောက်ရှိ လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် စက်မှုလုပ်ငန်း ၀ န်ဆောင်မှုများကို အထူးပြု သည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်ပြီး R & D ၊ အားသွင်း ခြင်းနှင့် အစားထိုး ပစ္စည်းကိရိယာများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းချ ခြင်း၊ ဘူတာရုံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ခြင်း၊ လည်ပတ် ခြင်း၊ မော်တော်ယာဉ် ရောင်းချ ခြင်း၊ ငှားရမ်း ခြင်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်း ကွင်းဆက် ဂေဟစနစ် ပလက်ဖောင်း တည်ဆောက် ခြင်းတို့ကို ထောက်ပံ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ EV Link အားသွင်း ဝန်ဆောင်မှု ပလက် ဖော င်းသည် မှတ်ပုံတင်ထားသော သုံးစွဲသူ ၁. ၆ ၇၂ သန်း ရှိပြီး တစ်ချိန်တည်းတွင် အားသွင်း လိပ်ခေါင်း ၃ ၉၈, ၀၀၀ ကိုအသုံးပြု ထားသည်။
EV Link ကုမၸဏီ ဥကၠ႒ Zou Dazhong က ကုမၸဏီႏွင့္ Xiaoha Power Exchange တို႔သည္ လွ်ပ္စစ္ ႏွစ္ ဘီး ယာဥ္ က႑တြင္ ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး ျမင့္ ႏွစ္ ဘီး ယာဥ္ ၏ စြမ္းအင္ က႑တြင္ အစိမ္းေရာင္ စြမ္းအင္ အျပန္အလွန္ ခ်ိတ္ဆက္ မႈ ပလက္ ေဖာင္း တစ္ခုကို ပူးတြဲ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဦးဆောင် ပြည်တွင်း Two-ဘီး မော်တော်ယာဉ် ပါဝါ လဲလှယ် ဝန်ဆောင်မှု အမှတ်တံဆိပ် အဖြစ်, Xiaoha ပါဝါ လဲလှယ် ဇွန်လ 2019 အတွက် Hello Inc., CATL နှင့် Ant Group မှ ပူးတွဲ ရန်ပုံငွေ ရရှိ ခဲ့ပါတယ်, & nbsp, တရုတ် အတွက် အကြီးဆုံး လျှပ်စစ် Two-ဘီး မော်တော်ယာဉ် စွမ်းအင် ကွန်ယက်ကို အခြေခံအဆောက်အအုံ တည်ဆောက်ရန် ကတိကဝတ်;
ယခုနှစ် သြဂုတ် လကုန် အထိ ကော်ပိုရေးရှင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည် မြို့ ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ကို လွှမ်းခြုံ နိုင်ခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး လည်ပတ် နေသော လျှပ်စစ် ဘီး နှစ် ဘီး ဘက်ထရီ တစ် သန်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး နေ့စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပြောင်းလဲမှု အကြိမ် ပေါင်း ရာနှင့်ချီ ။ nbsp;
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်အတွင်း Xiaoha သည် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Hello Company သည် သုံး နှစ်အတွင်း တစ်ခုတည်းသော carpool သန်း ၃၀၀ ပြီးစီး ခဲ့သည်
Hangzhou နှင့် Chengdu အပါအ ၀ င် မြို့ကြီး ၆ ခုတွင် ကား ပါကင် ၀ န်ဆောင်မှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် စမ်းသပ် ပြီးနောက် လူ ဦး ရေ ၃၀၀ အတွက် အမှာစာ ပြီးစီး ကြောင်း တရုတ် စက်ဘီးစီး ကုမ္ပဏီ Hello Inc က ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Industry Jun 24 ဇွန် 24, 2021